အချစ်ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ရင် အရမ်းတွေ Ro တက်ကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီ – Cele Top Stars
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အကယ်ဒမီ မေမေမယ်လိုဒီ ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်ကျော် တိုင်အောင် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး တစ်ယောက် အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပြီးခုချိန်ထိ ပရိသတ်များရဲ့ အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေမေ မယ်လိုဒီက မကြာသေးခင် ကာလတုန်းက အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးသားလေး တစ်ယောက်နဲ့အတူ Single mother အဖြစ် ရပ်တည်ပြီး အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းနေသူဖြစ်ပါတယ်..။
မေမေ မယ်လိုဒီက အနုပညာ အလုပ်တွေကိုလည်း ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး ကိုလဲ လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကို လိုက်စားတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်လေးက ကျစ်လစ်ပြီး ရုပ်ရည်ကလည်း နုပျိုလှပနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မယ်လိုဒီကတော့ လတ်တစ်လောမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားထားရတာလည်း ဖြစ်တာကြောင့် သူမကိုယ်တိုင်ဆော့ထားတဲ့ Tiktok လေးတွေနဲ့ အမြဲတင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာလည်း သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို Instagram မှာ တင်ပေးပါသေးတယ်။..
ဒီနေ့လေး မှာတော့ မယ်လိုဒီက ” သူမက အချစ်နဲ့ပက်သက်ရင် အရမ်းကို တဟ်ဖက်ကမ်းလွန်အောင် ချစ်ပြီး ရိုတတ်တဲ့အပြင် . သူမမှာ ရိုလွန်းလို့ အရမ်းကိုမောလာတဲ့ အကြောင်းကို့ပြန်တင်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ သူမတင်လာတဲ့ အောက်မှာတော့ သူမကိုအချစ်တွေနဲ့ စနောက်ထားပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီး လည်း မယ်လိုဒီ လိုရိုတတ်အောင် သင်ယူကြပါအုံး။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
Source: Melody Myo
ခဈြလှစှာသော ပရိတျသတျကွီးရေ အကယျဒမီ မမေမေယျလိုဒီ ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဆယျစုနှဈကြျော တိုငျအောငျ ရုပျရှငျကားကွီးတှမှော ခေါငျးဆောငျမငျးသမီး တဈယောကျ အနနေဲ့ ရပျတညျခဲ့ပွီးခုခြိနျထိ ပရိသတျမြားရဲ့ အခဈြကို ပိုငျဆိုငျထားဆဲ ဖွဈပါတယျ။ မမေေ မယျလိုဒီက မကွာသေးခငျ ကာလတုနျးက အိမျထောငျရေး အဆငျမပွဖွေဈပွီးသားလေး တဈယောကျနဲ့အတူ Single mother အဖွဈ ရပျတညျပွီး အေးခမျြးတဲ့ဘဝလေးကို ဖွတျသနျးနသေူဖွဈပါတယျ..။
မမေေ မယျလိုဒီက အနုပညာ အလုပျတှကေိုလညျး ပွနျလညျလုပျဆောငျနပွေီး ကိုယျပိုငျစီးပှားရေး ကိုလဲ လုပျကိုငျနသေူဖွဈပွီး ကနျြးမာရေးကို လိုကျစားတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျလေးက ကဈြလဈပွီး ရုပျရညျကလညျး နုပြိုလှပနတောပဲဖွဈပါတယျ။ မယျလိုဒီကတော့ လတျတဈလောမှာ အနုပညာအလုပျတှကေို ရပျနားထားရတာလညျး ဖွဈတာကွောငျ့ သူမကိုယျတိုငျဆော့ထားတဲ့ Tiktok လေးတှနေဲ့ အမွဲတငျပေးဖွဈပါတယျ။ တဈခါတဈရံမှာလညျး သူမရဲ့ လှုပျရှားမှုလေးတှကေို Instagram မှာ တငျပေးပါသေးတယျ။..
ဒီနလေ့ေး မှာတော့ မယျလိုဒီက ” သူမက အခဈြနဲ့ပကျသကျရငျ အရမျးကို တဟျဖကျကမျးလှနျအောငျ ခဈြပွီး ရိုတတျတဲ့အပွငျ . သူမမှာ ရိုလှနျးလို့ အရမျးကိုမောလာတဲ့ အကွောငျးကို့ပွနျတငျလာခဲ့ပါသေးတယျ။ သူမတငျလာတဲ့ အောကျမှာတော့ သူမကိုအခဈြတှနေဲ့ စနောကျထားပါသေးတယျ။ ပရိသတျကွီး လညျး မယျလိုဒီ လိုရိုတတျအောငျ သငျယူကွပါအုံး။ဖတျရှူ့ပေးကွတဲ့ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော..။
တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တစ်သားတည်းရှိကြောင်း ထရက်ရှာလေးကိုကချင်ရိုးရာဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီး သက်သေပြလိုက်တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်